स्वर्ग :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
कविता | प्रकास बेल्बासे
ति गहिरा आँखा
फेरि पटपट फुटेका पैतला
देंखे, तुना छिनेका चप्पल
पटुकी च्याथेर अल्झ्याइएको अहो !
र सुँघे तिम्रो माटो बसाउने मजेत्रो
मान्छेहरु पहिरनमा सुन्दरता खोजे,
म आमा`मा भेंटे ।
हातमा चिम्टा र ढुङ्रो
ती पुत्याउराका आँसु
देंखे, निधारमा पसिनाको झरि
आगो कराइ भुटुना र मकै अहो !
र हेरे, कुंडेमा घोप्टिदै गरेको गाबु
भिडहरु स्वाद खोज्दै चमेना पसे
म अगेनिमै पलेटी कंसे ।
यी आँखैभरिका बारि,
मास्थिर घर मुन्तिर भकारो
देंखे , घोप्टी परेको धारो
चिसो पानी त्यो सेङ्लेङ्को अहो !
र हेरे, मोल्खातो मुनिको बेलौति
जिन्दगिहरु ४ आनामा बसाइसरे
म चौकसमा अगार घंसे ।
प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ०५ (December 20, 2016)